ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကလေး. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် စစ်ကိုင်းတို
ⓘ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကလေး. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့မှမိုင် နှင့် ကလေးဝမြို့မှ မိုင် ကွာဝေး၍ အေးသာယာကျေးရွာ အနီးတွင် တည်ရှိပြီး ၃၈. ..
၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်၍ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကလေး အဖြစ်သို့ အဆင့်တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကလေးမှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပို့ချလျှက်ရှိသော သင်တန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကလေးမှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော ဘွဲ့ဒီဂရီများနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။